Noho ny matihanina avo-fahombiazana ny fanompoana sy ny angovo sitrana tanteraka rafitra rivotra vahaolana, HOLTOP nandresy tamin'ny mpanolo-tsaina eo amin'ny mpanolo-tsaina the20 orinasa ho an'ny fanarenana angovo rivotra rafitra Wantou World Buildings Tetikasa in Hefei, Anhui Province.With tsara tombontsoa ara-teknika, HOLTOP nahomby nanao sonia maherin'ny 2.000 karazana angovo sitrana rivotra rafitra ho an'ny tetikasa hamoronana maitso, manan-tsaina, ara-pahasalamana sy ny kalitaon'ny rivotra avo velona tontolo iainana.
Wantou World Building dia alow-hakitroky kalitao fiaraha-monina naorin'ny ny Wantou Fampiasam-bola sy Construction Company. Ny fitambaran'ny faritra fanorenana dia tokony ho 350.000 metatra tora-droa.
Rehefa avy nandray ny fanasana ho an'ny mpanolo-tsaina, HOLTOP nitarika ny fikarohana maro sy ny fandalinana ny tontolo iainana, fampiononana taovam-pisefoana, sy ny mpampiasa traikefa, sns Miorina amin'ny rivotra madio ny rafitra fototra, Holtop nanolo-kevitra ny hampiasa ny avo angovo fahombiazana amin'ny rafitra fanarenana rivotra PM2.5 sivana sy ny fanaraha-maso ny manan-tsaina. Na dia ny fampiasam-bola voalohany hitombo, ny hery dia ho voavonjy amin'ny asa andavanandro sy ny kalitaon'ny rivotra an-trano dia ho foana ao amin'ny ambaratonga voalohany hanangana hery mamonjy sy toe-piainana ara-pahasalamana.
Araka ny fangatahana tsy mitsaha-mitombo any amin'ny avo kalitao an-trano sy ny trano miorina mafy, angovo ventilator fanarenana tokony ho nametraka ao an-trano mba hamorona angovo famonjena sy ny tontolo iainana ara-pahasalamana velona. Fa matihanina kokoa tolo-kevitra ho an'ny trano, dia mifandraisa ny varotra ekipa.